Kodiarana fiara, kodiarana kodiarana, kodiarana kodiarana - Rayone
Fanatsarana ny akora mahazatra
Novokarin'ny kodiarana rayone seiko
RAYONE WHEELS, natsangana tamin'ny Mey 2012, dia orinasa manana teknolojia avo lenta maoderina izay manokana amin'ny famolavolana, famokarana ary ny fivarotana kodiarana firavaka alimina fiara. Ny orinasa RAYONE dia manarona faritra mihoatra ny 200.000 metatra toradroa, miaraka amina famokarana kodiarana aliminiana matihanina sy mandroso ary fitaovana fitiliana.
RAYONE WHEELS natsangana tamin'ny Mey 2012, dia orinasa teknolojia avo lenta maoderina izay manokana amin'ny famolavolana, famokarana ary fivarotana kodiarana alimina fiara-fiara. Ny orinasa RAYONE dia manarona faritra mihoatra ny 200.000 metatra toradroa, miaraka amina famokarana kodiarana aliminiana matihanina sy mandroso ary fitaovana fitiliana.
Ny foibenay dia vita amin'ny alimina aliminioma kalitao tsara indrindra eny an-tsena, izay afaka manatsara ny kalitao avy amin'ny loharano ary mitondra anao hatrany.
Novokarin'i Daichang Seiko
Ny foiben-kodiaranay dia voasedra amin'ny fiantraikan'ny fahateren'ny rivotra, fotoana fohy ary toy izany alohan'ny handaozany ny orinasa.
Serivisy be pitsiny
Ny mpanjifa rehetra mividy ny vokatray dia manana fanontaniana momba ny vokatray, ary hanompo anao izahay.
A007 17 / 18Inch Aluminium Alloy Wheel Rims Ho an'ny Pa ...
A006 17 / 18Inch Aluminium Alloy Wheel Rims Ho an'ny Pa ...
A005 18Inch Aluminium Alloy Wheel Rims Ho an'ny Passe ...
A004 18Inch Aluminium Alloy Wheel Rims Ho an'ny Passe ...
A003 18Inch Aluminium Alloy Wheel Rims Ho an'ny Passe ...
A002 18Inch Aluminium Alloy Wheel Rims Ho an'ny Passe ...
A001 17Inch Aluminium Alloy Wheel Rims Ho an'ny Passe ...
Tao anatin'ny enin-taona, ny kodiarana Rayone dia niova avy tamin'ny zazalahy tsy manam-pahalalana ho lasa tanora feno hafanam-po, ary avelao isika hivoatra avy any laggard tsy misy laza ho olona miavaka amin'ny kodiarana ao ...
Minitra vitsivitsy amin'ny fivoriana ho an'ny implem ...
21 Okt -2020
Ny marainan'ny 27 Aogositra 2020, Jiangxi Rayone Wheel Technology Co., Ltd. dia nanao ny fivoriana fandefasana ny rafitra fitantanana indostrialy sy fampidirana fampahalalana ao amin'ny t ...
15 Oktobra -2020
Tamin'ny 14 Oktobra 2020, ny fihaonan'ny Fuzhou Enterprise Share Reform Promosi sy ny fifamatorana fampindramam-bola amin'ny alàlan'ny hetsika Event Train (Lamesa fanaovan-tsonia fanavaozana) dia tena lehibe ...